tarihin’ny filohany, Chandoutis Raoera. Mahatsiaro manana adidy izahay fiarahamonim-pirenena, hoy izy, ary hafatra ho an’izao tontolo izao ny hoe efa nihatra tamin’ny andron’ny zanak’Israely ny areti-mandringana toy izay mitranga amin’izao. Fanefitra voalohany tokony hifantohan’ny malagasy, noho izany, hoy ity filohana fikambanana ity ny vavaka. Nanolotra teny heveriny hanavotra ao anatin’izao zava-mitranga izao ao anatin’ny Baiboly Kristianina, noho izany, ny tenany dia izay voasoratra ao amin’ny Eksodosy 23: 25, Ohabolana 4: 22, Joely 2: 12-14 ary Salamo 91. Fanefitra faharoa, hoy izy, ny fampiakarana hery fiarovana amin’ny alalan’ny fihinanana legioma, vaomaintilany 3 isan’andro, ranomboakazo toy ny voasarimakira na koa sakamalaho. Ilaina ny misotro rano mafana sy manasa tanana amin’ny savony ka raha azo atao dia savony Nosy satria io no tena matanjaka, hoy hatrany ny tenany. Na inona na inona finoantsika, hoy izy, dia tokana ihany ny hafatra dia ny hoe mila miverina amin’Andriamanitra isika.